NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌ MMIRI NA IJIKWA OLU - ONYE NA-AGAGHARỊ - 2019
Onye ọ bụla okike malitere ọrụ ya n'oge ọ bụ nwata, mgbe e nwere ọtụtụ echiche dị ọhụrụ n'isi ya, na nchịkọta nke pensụl n'aka. Ma oge nke oge a agbanweela ntakịrị, ugbu a, ụmụaka ịbịaru ihe omume na-adịkarị nso. Otu n'ime ihe ndị dị otú ahụ bụ Tux Paint, nke e mere maka maka ụmụaka.
Tux Paint bụ usoro n'efu (nke e nyere) maka ịbịaru. E kere ya kpọmkwem maka ndị na-ege ụmụaka, dịka ọ na-egosi site na ụda na-ada ụda na interface dị mma. N'ezie, ọ dịghị onye na-egbochi ịbịakwute ya na ndị ọrụ okenye, ma maka ụfọdụ nzube dị oké njọ ọ na-esiri m ike iji usoro ihe omume ahụ.
Ebe ọ bụ na e mere atụmatụ maka ụmụaka, ọrụ a yiri ka ọ dị mma. Mgbe ị na-eji ngwa dị iche iche abịa, a na-anụ ụda dị iche. Ụda ahụ nwere ihe ndị dị na stereo, ma ọ bụrụ na ị bịaruo n'akụkụ aka nri nke waaji, mgbe ahụ, a ga-akpọ ụda site na ọkà okwu ziri ezi. Enwere ike gbanyụọ ụda na ntọala.
Ihe di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche bu ihe di egwu, obu ezie na obu ihe umuaka nke umuaka, n'ihi na nwatakiri agagh enwe ike ghari ya. Maka ngwá ọrụ ọ bụla enwere ọtụtụ ọdịiche dịgasị iche, gbakwunye na nke a, ịnwere ike ibudata stampụ na brushes ọzọ ka ị gbanwee usoro ahụ. Karịsịa a otutu mmezi brushes ke ngwá ọrụ "Ime Anwansi".
Ndabere window dị
Igwe mmemme ahụ anaghị agbanwe agbanwe, foto ndị a zoputara ga-enwe otu nha, nke a ga-agbanwe na ntọala. Ewelitela window mbụ 800x600.
Ohere maka ndi nkuzi na ndi nne na nna
Ntọala mmemme adịghị na nhazi ọbịaru, ka ọ ghara inye nwatakịrị ohere iji dozie ihe. Kama nke ahụ, a na-etinye ha na usoro ihe omume ahụ, dị ka ngwa dị iche. N'ebe ahụ, ị ​​nwere ike gbanyụọ ụda ma gbanwee vidiyo ahụ. Mee ka ọkpụkpụ kpoo mkpịsị ọnụ ka nwa ahụ ghara ịgafe ihe omume ahụ. I nwekwara ike iwepu ụfọdụ ngwaọrụ ma ọ bụ ọrụ nke usoro ihe ahụ, na-eme ka ọ dịkwuo mfe.
Na mgbakwunye na ụcha njirimara na mmemme, ị nwere ike ịhọrọ nke dabara na palette.
Ntọala dị iche iche site na usoro mmemme
Kwado asụsụ 129, n'etiti ndị Russia
Nhọrọ zuru oke nke ntọala
Ọ bụrụ na ị na-ele usoro ihe a anya dịka ngwá ọrụ maka ịrụ ọrụ dị oke mkpa, mgbe ahụ i nwere ike ịchọta ọtụtụ adịghị ike na ya, mana ọ bụrụ na ị na-ele ya anya dị ka ndị mmepe a chọrọ, mgbe ahụ, enweghị ntinye. Tụkwasị na nke ahụ, a pụrụ iji ya iji zụlite nkà dịgasị iche iche, dị ka ngwá ọrụ na-enye ya ohere.
Download Tux Paint maka n'efu
Nbudata nsonaazụ ọhụrụ site na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke usoro ihe omume ahụ
Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ Sai Paint.NET Agba 3d Pixelformer
Tux Paint bụ editọ ndị nchịkọta akụkọ na nnukwu ntanetị nke ngwa ngwa na-emepụta ihe dị iche iche nke a na-elekwasị anya na ụmụaka.
Onye Mmepụta: Nzuzo Ọhụrụ
https://termotools.com ig.termotools.com © Onye na-agagharị 2019